१८:२९, १८ फेब्रुअरी २०१६ जस्तै गरी पुनरावलोकन
३२ bytes added , ५ वर्ष अघि
०७:३५, १८ फेब्रुअरी २०१६ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
१८:२९, १८ फेब्रुअरी २०१६ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (→‎उपनिषदका अनुवाद)
अरबी दार्शनिक अल– बिरुनीले[[अल–बिरुनी]]ले ११ औं शताब्दीमा हिन्दुहरुका धर्म ग्रन्थ अध्ययन गरेको प्रमाण पाइन्छ । किनभने उनले हिन्दु दार्शनिक ग्रन्थ गीतोपनिषदको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । शाहजहांको जेठो छोरा दाराशिकोहले काश्मीरका पण्डितहरुको मद्दतले सन् १६४४ देखि सन् १६५० को अवधिमा ५० वटा उपनिषदको फारसी भाषामा अनुवाद गराएका थिए । संभवतः यो नै पहिलो अनुवाद थियो । सन् १५५६ मा अकबरले पनि केही उपनिषदको अनुवाद गराएका थिए तर पनि सन् १७७५ सम्म कुनै पनि यूरोपियन विद्वानले उपनिषदहरुतिर ध्यान दिएको पाईंदैन ।
अयोध्याको नवाब सुजाउद्दौलाको राजसभाका पर्सियन रेजीडेन्ट एम गेन्टिलले सन् १७५५ मा प्रसिद्ध फ्रेञ्च दार्शनिक र विश्व यात्रु एन्क्वेटिल डुपेर्रिनलाई दाराशिकोहद्वारा गराइएको उपनिषदको पर्सियन अनुवाद उपलब्ध गराए । एन्क्वेटिलले सन् १७५५ देखि १७६१ सात वर्ष पान्डिचेरी, वाराणसी, अयोध्या आदि विभिन्न स्थानमा हिन्दु दर्शनको अध्ययनका लागि भ्रमण गरेका थिए । भनिन्छ एन्क्वेटिलले एक अर्को प्रति पनि कतैबाट भेटाएका थिए । अनि उनले पहिलो पटक युरोपियन भाषाहरु अर्थात् ल्याटिन र फ्रेन्चमा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरे । तथापि सन् १८०१–२ मा ल्याटिन अनुवाद औपनिखत OPNIKHAT नामले प्रकाशित भयो तर फ्रेन्च अनुवाद बजारमा आउन सकेन । यसरी यो युरोपका विचारकहरुको जानकारीमा आयो तर अनुवादको पनि अनुवाद भएकोले ज्यादै दुर्बोध्य थियो जसलाई धेरैले बुझन सकेनन् ।
यसरी यो युरोपका विचारकहरुको जानकारीमा आयो तर अनुवादको पनि अनुवाद भएकोले ज्यादै दुर्बोध्य थियो जसलाई धेरैले बुझन सकेनन् । जर्मन दार्शनिक शोपेन हावरले परिश्रमपूर्वक त्यस उपनिषदको अध्ययन गरे । त्यसलाई पढेर उनी ज्यादै प्रभावित भए । यो कठ उपनिषद थियो । उनले आफ्ना लेखहरुमा भनेका छन्, उपनिषदका ऋषिहरुले गरे जति उच्च, पवित्र र गम्भीर चिन्तन विश्वमा अरु कसैले गर्न सक्दैन । सन् १८४४ मा बर्लिनमा साहित्यकार शेलिंग महोदयको प्रवचनमाला सुनेर म्याक्समूलरको ध्यान उपनिषदतर्फ आकर्र्षित भएको हो । म्याक्स मुलर रामकृष्णका जीवन र उपदेशबाट ज्यादै प्रभावित थिए । भनिन्छ, त्यसबेला बेलायतका एक जना साहित्यका प्राध्यापकले बंगालमा रामकृष्णको प्रवचन सुनेर उनको अलौकिकता अनुभव गरिसकेका थिए । संभवतः शेलिंग उनै साहित्यकार थिए । म्याक्समुलरले उपनिषदको सांगोपांग अध्ययन गर्न संस्कृत भाषाको गहिरो अध्ययन गरे । उनले मूल संस्कृतका पुस्तक पढेर तिनीहरुलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए । म्याक्स मुलरसंग स्वामी विवेकानन्द कति प्रभावित थिए भने उनले म्याक्स मुलरसंग उनका घर गइ भेट गरेर सम्मान व्यक्त गरेका थिए । सन् १८७९ मा म्याक्स मुलरले यूरोपियन पाठकका लागि कठ उपनिषदको पहिलो बोधगम्य अनुवाद प्रस्तुत गरे । यसबाट यो यूरोपमा चर्चित भयो । तर यसको अंग्रेजी अनुवाद गर्ने पहिलो व्यक्ति ब्रह्म समाजका संस्थापक तथा संस्कृत, अंग्रेजी, र फारसीका विद्वान राजा राममोहन राय (सन्् १७७५–१८३३) हुन्, जसलाई भारतमा सती प्रथाको अन्त गर्ने अगुवा व्यक्ति मानिन्छ । (बेलायत जाने उनी पहिलो हिन्दु मानिन्छन् । समुद्र यात्रा र विधर्मीको देशमा गए जात जाने कट्टर बंगाली समाजमा त्यो एक क्रान्तिकारी कदम थियो ।) त्यस पछि यस उपनिषदका अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन, र फ्रेञ्च अनुवादहरु भए । सर एडविन आर्नोल्डले कठ उपनिषदको अंग्रेजी व्याख्या द सीक्रेट अफ डेथ लेखेर यसलाई यूरोपमा अझ लोकप्रिय बनाए । सन् १८०५ मा कोलब्रुकले १७० वटा उपनिषदहरु पाएको जानकारी दिएका छन् । रामकृष्ण मठको तर्फबाट बेलायतमा पठाइएका संन्यासी स्वामी परमानन्दले चार उपनिषदहरु ईशा, कठ, केन, र मुण्डक उपनिषद्को मूल संस्कृतबाट अंग्रेजी अनुवाद गरी सन् १९०९मा ब्रिटिश शिष्यहरुलाई प्रवचन गरेका थिए । यो सन् १९१९ मा पुस्तकाकार रुपमा प्रकाशित भयो । तर युरोपेली पाठकहरुका लागि तयार गरिएकोले त्यसमा संस्कृत मूल नराखेर केवल अंग्रेजी अनुवाद मात्र राखिएको थियो । ब्रिटिश कवि मार्टिन सीमोर स्मिथले उपनिषदहरु लाई विश्वमा लेखिएका सर्वाधिक प्रभावशाली सय पुस्तकहरुको उपमा दिएका छन् । श्रीमदभगवद्गीतालाई पनि उपनिषदमध्येको एक मानिन्छ । इमरसन, थोरो, कान्ट, शोपेनहावर र अन्य केही दार्शनिकहरु उपनिषदका विषय वस्तुको गहनताबाट अत्यन्त प्रभावित छन् । युरोपीय विद्वानहरुले प्रशंसा गरेकोले उपनिषद्हरुको महत्त्व बढेको भन्ने होइन बरु उपनिषद् पढेर उनीहरु धन्य बनेकोमा हामीहरु गौरवान्वित भएका छौं । <ref>धर्मविज्ञान सार संक्षेप– खप्तड बाबा, सम्पादक चूडानाथ भट्टराय, श्रीमती जयाराज्यलक्ष्मी शाह, थापाथली काठमाडौं, वि.सं २०५१ ।</ref> राल्फ बाल्डो इमरसनले आफ्नो इम्मोर्टालिटि निबन्धमा कठ उपनिषदको सानो विवरण उल्लेख गरेका छन् । इमरसन ती अमेरिकन कवि हुन् जसले अंग्रेजीमा ब्रह्म कविता लेखेका छन् । यो कविता वर्तमानमा त्रि वि मा अंग्रेजीको पाठ्यक्रममा राखिएको छ । नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले केही वि.सं. २०३० मा नौ प्रमुख उपनिषदहरुको अनुवाद प्रकाशित गरेको छ ।<ref> नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नौ उपनिषद वि.सं. २०३०</ref> यसका अनुवादक माधव प्रसाद देवकोटा हुन् । यस पछि प्रतिष्ठानले छान्दोग्य र बृहदारण्यक उपनिषदको पनि अनुवाद प्रकाशित गरेको छ । समय समयमा विद्वानहरुले विभिन्न उपनिषदहरु अनुवाद र व्याख्या प्रकाशित गरेका छन् । नेपाली विद्वानहरुले पनि उपनिषदहरुमा निकै रुचि राख्नु भएको कुरा यी अनुवादहरुले स्पष्ट गर्दछन् । तर १०८ उपनिषद्लाई हिन्दीमा अनुवाद गरी जनसमक्ष ल्याउने स्तुत्य प्रयास पं. श्रीराम आचार्यले गरेका छन् । यो तीन खण्डको प्रकाशन युगनिर्माण योजनाले गरेको छ ।<ref>एक सौ आठ उपनिषद (तीन खण्ड)– पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, युगनिर्माण योजना, सन् २०१० ।</ref>
जर्मन दार्शनिक शोपेन हावरले परिश्रमपूर्वक त्यस उपनिषदको अध्ययन गरे । त्यसलाई पढेर उनी ज्यादै प्रभावित भए । यो कठ उपनिषद थियो । उनले आफ्ना लेखहरुमा भनेका छन्- उपनिषदका ऋषिहरुले गरे जति उच्च, पवित्र र गम्भीर चिन्तन विश्वमा अरु कसैले गर्न सक्दैन । सन् १८४४ मा बर्लिनमा साहित्यकार शेलिंग महोदयको प्रवचनमाला सुनेर म्याक्समूलरको ध्यान उपनिषदतर्फ आकर्र्षित भएको हो । [[म्याक्स मुलर]] रामकृष्णका जीवन र उपदेशबाट ज्यादै प्रभावित थिए । भनिन्छ, त्यसबेला बेलायतका एक जना साहित्यका प्राध्यापकले बंगालमा रामकृष्णको प्रवचन सुनेर उनको अलौकिकता अनुभव गरिसकेका थिए । संभवतः शेलिंग उनै साहित्यकार थिए ।
म्याक्समुलरले उपनिषदको सांगोपांग अध्ययन गर्न संस्कृत भाषाको गहिरो अध्ययन गरे । उनले मूल संस्कृतका पुस्तक पढेर तिनीहरुलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए । म्याक्स मुलरसंग स्वामी विवेकानन्द कति प्रभावित थिए भने उनले म्याक्स मुलरसंग उनका घर गइ भेट गरेर सम्मान व्यक्त गरेका थिए । सन् १८७९ मा म्याक्स मुलरले यूरोपियन पाठकका लागि कठ उपनिषदको पहिलो बोधगम्य अनुवाद प्रस्तुत गरे । यसबाट यो यूरोपमा चर्चित भयो ।
तर यसको अंग्रेजी अनुवाद गर्ने पहिलो व्यक्ति ब्रह्म समाजका संस्थापक तथा संस्कृत, अंग्रेजी, र फारसीका विद्वान राजा राममोहन राय (सन्् १७७५–१८३३) हुन्, जसलाई भारतमा सती प्रथाको अन्त गर्ने अगुवा व्यक्ति मानिन्छ । बेलायत जाने उनी पहिलो हिन्दु मानिन्छन् । समुद्र यात्रा र विधर्मीको देशमा गए जात जाने कट्टर बंगाली समाजमा त्यो एक क्रान्तिकारी कदम थियो ।
त्यस पछि यस उपनिषदका अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन, र फ्रेञ्च अनुवादहरु भए । सर एडविन आर्नोल्डले कठ उपनिषदको अंग्रेजी व्याख्या द सीक्रेट अफ डेथ लेखेर यसलाई यूरोपमा अझ लोकप्रिय बनाए । सन् १८०५ मा कोलब्रुकले १७० वटा उपनिषदहरु पाएको जानकारी दिएका छन् । रामकृष्ण मठको तर्फबाट बेलायतमा पठाइएका संन्यासी स्वामी परमानन्दले चार उपनिषदहरु ईशा, कठ, केन, र मुण्डक उपनिषद्को मूल संस्कृतबाट अंग्रेजी अनुवाद गरी सन् १९०९मा ब्रिटिश शिष्यहरुलाई प्रवचन गरेका थिए । यो सन् १९१९ मा पुस्तकाकार रुपमा प्रकाशित भयो । तर युरोपेली पाठकहरुका लागि तयार गरिएकोले त्यसमा संस्कृत मूल नराखेर केवल अंग्रेजी अनुवाद मात्र राखिएको थियो ।
ब्रिटिश कवि मार्टिन सीमोर स्मिथले उपनिषदहरु लाई विश्वमा लेखिएका सर्वाधिक प्रभावशाली सय पुस्तकहरुको उपमा दिएका छन् । श्रीमदभगवद्गीतालाई पनि उपनिषदमध्येको एक मानिन्छ । इमरसन, थोरो, कान्ट, शोपेनहावर र अन्य केही दार्शनिकहरु उपनिषदका विषय वस्तुको गहनताबाट अत्यन्त प्रभावित छन् । युरोपीय विद्वानहरुले प्रशंसा गरेकोले उपनिषद्हरुको महत्त्व बढेको भन्ने होइन बरु उपनिषद् पढेर उनीहरु धन्य बनेकोमा हामीहरु गौरवान्वित भएका छौं । <ref>धर्मविज्ञान सार संक्षेप– खप्तड बाबा, सम्पादक चूडानाथ भट्टराय, श्रीमती जयाराज्यलक्ष्मी शाह, थापाथली काठमाडौं, वि.सं २०५१ ।</ref>
राल्फ बाल्डो इमरसनले आफ्नो इम्मोर्टालिटि निबन्धमा कठ उपनिषदको सानो विवरण उल्लेख गरेका छन् । इमरसन ती अमेरिकन कवि हुन् जसले अंग्रेजीमा ब्रह्म कविता लेखेका छन् । यो कविता त्रि वि मा अंग्रेजीको पाठ्यक्रममा राखिएको छ । नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले केही वि.सं. २०३० मा नौ प्रमुख उपनिषदहरुको अनुवाद प्रकाशित गरेको छ ।<ref> नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नौ उपनिषद वि.सं. २०३०</ref> यसका अनुवादक माधव प्रसाद देवकोटा हुन् । यस पछि प्रतिष्ठानले छान्दोग्य र बृहदारण्यक उपनिषदको पनि अनुवाद प्रकाशित गरेको छ । समय समयमा विद्वानहरुले विभिन्न उपनिषदहरु अनुवाद र व्याख्या प्रकाशित गरेका छन् । नेपाली विद्वानहरुले पनि उपनिषदहरुमा निकै रुचि राख्नु भएको कुरा यी अनुवादहरुले स्पष्ट गर्दछन् । तर १०८ उपनिषद्लाई हिन्दीमा अनुवाद गरी जनसमक्ष ल्याउने स्तुत्य प्रयास पं. श्रीराम आचार्यले गरेका छन् । यो तीन खण्डको प्रकाशन युगनिर्माण योजनाले गरेको छ ।<ref>एक सौ आठ उपनिषद (तीन खण्ड)– पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, युगनिर्माण योजना, सन् २०१० ।</ref>
उपनिषद ग्रन्थहरुको विषय अन्य भाषामा व्यक्त गर्न गाह्रो भएको म्याक्समुलरले यसरी व्यक्त गरेका छन् आधुनिक शब्द गोला छन् तर उपनिषदहरुको विषय वस्तु चारकुने छ । जतिसुकै प्रयास गरे पनि केही कुरा बांकी रहन जान्छ ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/531658" बाट अनुप्रेषित